Bacaha xiraha faakuumka oo leh siib iyo waalle
Iyada oo leh waayo-aragnimo 20 sano ah soo saarista bacaha vacuum sealer iyo duub,Boya kuma siin karo oo keliya qiimaha tartanka laakiin sidoo kale xulasho ballaaran oo kala duwan.
Alaabada isticmaalka guriga, ku habboon ayaa ah tan ugu muhiimsan uguna yar tirada, Bacaha vacuum sealer leh jibbaar iyo waalka waa badeecada ugu fiican ee isticmaalka guriga oo leh qiime jaban, uma baahnid inaad iibsato mishiinka faakuumka, bacahana waa dib-u- la xidhi karo sidoo kale , ma isticmaali kartaa hal mar kaliya .
Sida mid ka mid ah wax soo saarka hormuudka ah ee xirmo dabacsan ee Shiinaha, Boya ma aha oo kaliya inay ku siiso qalabka wax lagu duubo, laakiin sidoo kale mashiinka baakadaha vacuum. Mashiinka baakadaha vacuum (dabiici kara) , Mashiinka baakadaha vacuum maqaarka , Mashiinka baakadaha aan biyuhu , Mashiinka kulaylka yareeyaan, Baakadaha nooca qaboojiyaha nooca Box.
MAKIINKA BAAKAYSIGA VACUUM ee maqaarka ee Boya wuxuu leeyahay faa'iidooyinka baaxadda ballaaran ee isticmaalka.Filimada isku midka ah waa filimka PE ama PE / EVOH / PE .Waa nooc cusub oo baakad ah oo faa'iido u leh muuqaalka sare ee alaabta aad ku xiran tahay. si looga hortago boodhka .Waxay sidoo kale ilaalin kartaa alaabtaada inta lagu jiro gaadiidka .
mashiinka qolka vacuum
Sida mid ka mid ah wax soo saarka hormuudka ah ee xirmo dabacsan ee Shiinaha, Boya ma aha oo kaliya inay ku siiso alaabta baakadaha laakiin sidoo kale mashiinka baakadaha vacuum .Waxaan ku siin karnaa mashiinka baakadaha qolka vacuum kala duwan, sida vacuum (buufi) mashiinka baakadaha, afar line vacuum mashiinka baakadaha, Mashiinka baakadaha vacuum daboolka lulid toos ah, laba-laabashada mashiinnada baakadaha vacuum, mashiinnada baakadaha vacuum-ga, mashiinka baakadaha qolka vacuum.
Mashiinka baakadaha qolka faakuumka yar wuxuu leeyahay hal qol oo kaliya oo shaqeynaya, oo ku habboon warshad yar, machadka cilmi-baarista, shaybaarka…Mashiinkan waxaa loo isticmaali karaa bacaha kala duwan tusaale ahaan bacaha faakuumka fidsan, bacaha vacuum-ka ee dhejiska ah, bacaha zipper, kiish taagan iyo wixii la mid ah.